Otu esi etinye Mono Framework na Debian 11 Bullseye - LinuxCapable
Otu esi etinye Mono Framework na Debian 11 Bullseye
October 1, 2021 by Jọshụa James
Bubata igodo GPP na ebe nchekwa
Wụnye Framework Mono
Mepụta ngwa ule
Mono bụ ikpo okwu mmepe mepere emepe nke dabere na ya .NET Okpokoro. Mono's NET mmejuputa iwu dabere na ụkpụrụ ECMA/ISO maka C # na akụrụngwa asụsụ nkịtị. Ọrụ Mono anọwo na-emepe ihe karịrị afọ iri ma na-aga n'ihu na-egosipụta n'ọtụtụ ngwa.
N'ime nkuzi na-esote, ị ga-ama ka esi etinye na hazie Mono na sistemụ arụmọrụ Debian 11 Bullseye gị.
Ngwungwu achọrọ: hụ wụnye ndabere achọrọ
A ga-achọrọ ndabere ndị a iji wụnye ma mee Mono nke ọma na sistemụ Debian 11 Bullseye gị. Mepee ọdụ iwu gị wee mee iwu a ka ịwụnye wee lelee ma etinyere ha.
Akụkụ mbụ nke nrụnye ga-abụ ibubata igodo GPG na ebe nchekwa ebe Debian 11 anaghị eso Mono na ebe nchekwa ya.
Mbụ, bubata ihe igodo GPG:
Ọzọ, bubata ebe nchekwa Mono:
Mara, nke a bụ ebe nchekwa Buster. Agbanyeghị, ọ na-arụ ọrụ maka Bullseye.
Ugbu a iji igodo GPG na ebe nchekwa Mono agbakwunyere, melite ndepụta nchekwa gị iji gosipụta mgbanwe ndị ahụ.
Ugbu a ị tinyela ebe nchekwa ahụ nke ọma, oge eruola ịwụnye Mono n'onwe ya. Iji mee nke a, ị ga-eji iwu apt install nke na-esonụ.
Na-esote, nyochaa nrụnye na ụdị arụnyere.
Mono JIT compiler version 6.8.0.105 (Debian 6.8.0.105+dfsg-3.2 Tue Jun 29 21:01:01 UTC 2021)
Nhọrọ ọzọ iji nyochaa ntinye nke Mono Framework bụ iji iwu amụma apt-cache.
*** 6.8.0.105+dfsg-3.2 500
Iji lelee na Mono na-arụ ọrụ, ị ga-emepụta obere mmemme nwere nkebi ahịrịokwu ama ama (Ndewo Ụwa). Ị ga-eme nke a site na imepe ederede ederede ọkacha mmasị gị iji mezuo nke a. Maka ntuziaka, anyị ga-eji nchịkọta ederede nano.
Mepee ọnụ ọnụ gị, wee mepụta faịlụ .cs dị ka n'okpuru.
Ọzọ, tinye koodu mmemme:
Ozugbo emere, CTRL + O ịzọpụta, yabụ CTRL + X ịpụ apụ.
Ugbu a ị nwere ike itinye koodu ahụ. Iji mee nke a, mebie iwu a:
Iwu mkpokọ ga-arụ ọrụ nke enwere ike ịkpọ aha helloworld.exe, Ozugbo emechara ị nwere ike ịme nke a ka ịhụ koodu na-arụ ọrụ site na ịme iwu a:
Ị ga-enweta nsonaazụ kpochapụ:
Ụzọ ọzọ iji mezuo mmemme ahụ bụ ime ka faịlụ ahụ rụọ ọrụ n'onwe ya. Enwere ike ime nke a site n'ịgbanwe ikike faịlụ dị ka n'okpuru:
Ugbu a ị nwere ike ịme faịlụ ahụ n'onwe ya site na ịme iwu ndị a:
Ị kwesịrị ịnata mmepụta ndewo ụwa ọzọ. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu n'oge ọ bụla, ị nwere ike ịtọ ntọala $PATH agbanwe.
N'ime ntuziaka ahụ, ị ​​mụtala ịwụnye usoro Mono wee mee obere mmemme mbụ gị na sistemụ Debian 11 Bullseye gị. N'ozuzu, Mono bụ nhọrọ dị egwu maka ndị mmepe nke na-agafe agafe na-enweghị akwụ ụgwọ maka ikikere ngwanrọ ma ọ bụ mkpọchi ndị na-ere ahịa yana ịbụ ebe mepere emepe. Naanị ihe dị njọ na Mono bụ na mgbe ụfọdụ API ya enweghị ike ịdị ka ọ dị ọhụrụ ozugbo mgbe ewepụtara ụdị ọhụrụ nke NET framework.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara iji Mono, gaa na onye ọrụ gọọmentị akwụkwọ.
Categories Debian Tags Nnenna 11 Bullseye, Mono Mail igodo
Otu esi etinye Python 3.9 na Debian 11 Bullseye
Otu esi etinye & hazie mmanya (WineHQ) na Pop!_OS 20.04